दाङका १० ओटा स्थानीय तहको बजेट ८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख
असार ११, दाङ । दाङका १० ओटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ०७८ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात ओटा गाउँपालिकाले नगरसभा एवं गाउँसभामार्फत बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
जिल्लाका १० ओटै स्थानीय तहले रू. ८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख ३२ हजार ९२८ बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रू. २ अर्ब ३४ करोड ३७ लाख ६४ हजारकोको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । विकास बजेट अर्थात् पूँजीगततर्फ रू. १ अर्ब ६८ करोड ४७ लाख अर्थात कुल बजेटको ७२ प्रतिशत र चालूतर्फ रू. ६६ करोड २० लाख ६४ हजार अर्थात २८ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरिएको उपमेयर माया आचार्यले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी घोराही उपमहानगरपालिकाले रू. १ अर्ब ८५ करोड २२ लाख ९३ हजारको गरेको छ । उपमेयर सीता सिग्देल न्यौपानेले चालूतर्फ रू. १ अर्ब ८ करोड ५७ लाख २२ हजार र पूँजीगततर्फ रू. ७६ करोड ६५ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन भएको बताइन् ।
त्यस्तै लमही नगरपालिकाले रू. ८३ करोड ७४ लाख ५६ हजार ८७ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ रू. १४ करोड ७२ लाख ६ हजार ८७ र पूँजीगततर्फ रू. ६३ करोड ४६ लाख ४ हजार छ ।
बंगलाचुली गाउँपालिकाले चालूतर्फ रू.२८ करोड ९९ लाख र पुँजीगतर्फ रू.२२ करोड ४६ लाख गरी रू. ५१ करोड ६३ लाखको बजेट ल्याएको छ ।
बबई गाउँपालिकाले रू.४६ करोड २१ लाख ५६ हजार ३६१ बराबरको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ रू. ७ करोड १७ लाख ३६ हजार ३६१ र पूँजीगततर्फ रू.१७ करोड २१ लाख ७० हजार रहेको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले रू.५० करोड ८७ लाख १७ हजार बजेट ल्याएको छ । जसमा चालूतर्फ रू.१० करोड १३ लाख ६७ हजार र पूँजीगततर्फ रू.४० करोड ७३ लाख ५० हजार बजेट रहेको छ ।त्यस्तै दंगीशरण गाउँपालिकाले रू.३९ करोड ९० लाख १४ हजार ४०० कोे बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा चालूतर्फ रू.६ करोड ७१ लाख १० हजार र पूँजीगततर्फ रू.३५ करोड बजेट छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाले रू.४३ करोड ५४ लाख ९६ हजार ६०० बराबरको बजेट सार्बजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ रू.२७ करोड ८ लाख ९६ हजार ६०० र पूँजीगततर्फ रू.१६ करोड ४६ लाख बजेट ल्याएको छ ।
त्यस्तै राप्ती गाउँपालिकाले रू.५२ करोड ६५ लाख ११ हजार ४८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । र गढवा गाउँपालिकाकाले रू. ५२ करोड १८ लाख २४ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
यहाँका सबै स्थानीय तहले विकास निर्माण तथा कृषिलगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।